PPiin Bukoo Uummanni Obsee danda’e hunda ofiif qotanui baasaa jiru - Kichuu
[ November 24, 2020 ] Mana hidhaa Masaraa Kumsaa Morodaa	Africa
[ November 24, 2020 ] Waraana ummata Tigiraay irratti baname waan morminuuf qabna!	News
[ November 24, 2020 ] Gamtaan Afriikaa Rakkoo Biyya Itoophiyaa Keessatti Dhalate Furuuf Ibsa ABO	Africa
[ November 24, 2020 ] BRAEKING NEWS: Qaaniidha!! Nafxanyaan Oromoo Sangaa Saamtee waraana ilmaan isaa fixaa jiru nyaachiisufi!!	Africa
[ November 24, 2020 ] Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP/OPDO/PP	News
[ November 24, 2020 ] Ethiopia: Threat of major hostilities in Mekelle seriously imperils civilian lives – Bachelet	Africa
[ November 24, 2020 ] U.N. Security Council to discuss Ethiopia informally, source says	World
[ November 24, 2020 ] ’Abiy Ahmed had to punish those seeking to break up Ethiopia’ – Djibouti President	Africa
[ November 24, 2020 ] Ethiopian refugee numbers in Sudan cross the 40,000 mark	World
[ November 24, 2020 ] Ethiopia: Tigray people ‘ready to die’ as leader rejects call to surrender	World
HomeAfaan OromooNewsPPiin Bukoo Uummanni Obsee danda’e hunda ofiif qotanui baasaa jiru
PPiin Bukoo Uummanni Obsee danda’e hunda ofiif qotanui baasaa jiru
1. Indiriyaas Isheetee kan TViin as bahe,Marii PP fi Gumii Calaltuu Heera Mootummaa dhoksaadhaan taasisaniin mitii? Dura “Indiriyaas nu deeggara” jedhanii as baasanii,Jaarsi totorraahee dubbii waliin jalaa laaqee,Jawar Yaada jaarsa kanaa eeree jennaan,as deebi’anii “Iskindir faarfame” jechuu eegalani.
2. Uummanni Oromoo Warra Kaleessa isa miidhes Warra har’a isa miidhaa jirus bareechee adda baafatee beeka. PPiin asiin mormatti huudhee nu qabaa,diina kaleessa waliin nu miidhanitti fuula nu deebisee,jabaa keenya dhabamsiisuuf yaadus hin milkaahu.
3. Gaafa Indiriyaas Isheetee Mallas wajjin hojjechaa ture,Abiyi Qabsoo Sabaa isa kamitti ture? Kan waan ABO wajjin hojjetu fakkaatee,gama kaaniin G7 waliinis hojjechaa,Basaastummaan utubaa ture isa mitii?
4. Har’as TPLFiin Badii kaleessa hojjetteef itti gaafatsmaa gochuu kan danda’u silaa Mootummaa humna fi Aangoo harkaa qabu PP ture. Garuu PPiin kana gochuu hin feene. Maaliif yoo jenne,TPLFiin Badii PP waliin hojjetaniif Ragaa waan of harkaa qabduuf,icciitiin hundi yoo gadi bahe nutis wajjin banna jedhanii waan sodaataniifi.
5. Har’as TPLFiin Uummata Oromootiif firoomtee miti. Garuu Diinno yeroo ammaa Caalmaatti Oromoo yaaddessu,Nafxanyoota fi Adeemsa PPiin ittiin Jabaa Oromoo cabsanii Nafxanyoota nutti roorrisiisuun,gabrummaa haaraadhaaf nu jilbeeffachiisuuf deemanidha.
6. Yeroo ammaatti Waa’ee hariiroo TPLF fi Namoota Siyaasa Oromoo hooggananii kan iyyaa jiru,Ilmaan Nafxanyaati. Nafxanyoonni Shira dur baraniin Aangootti dhufuudhaaf humni isaan sodaatan waa lama. TPLF fi Uummata Oromootidha. Nafxanyoonni TPLF waliin akka araaramuu hin dandeenye ni beeku. Itti bu’anii cabsuus akka hin dandeenye ni beeku. Garuu hedduu sodaatu. Kanaaf Nafxanyoonni Yeroo ammaa,PP irraa waan 2 barbaadu. Tokko Mootummaan TPLF akka rukutuuf. Lammata Jabaa Oromoo akka cabsaniif. Nafxanyoonni Sana booda PP diiguun Aangoo hunda dhuunfachuun salphaa akka ta’etti yaadu. Kanaaf duulli PPiin waa’ee TPLF itti jirtu jabeessan kun ergama Nafxanyootaa ta’uun beekamaadha.
The chance to “Democratizing Ethiopia” has come to an end unsuccessfully; the other ultimate option the Oromo people are left with is “Liberating Oromia” by any means necessary.
Justified cause – No force can stop that!
~FM! May 2020
Carraan “Itoophiyaa Dimokraatessuu” haala hin hawwamneen galma hanqatee jira; falli xumuraa Ummatni Oromoo qabu “Oromiyaa Walaba” karaa barbaachise kamiinuu milkeessuudha!
Kaayyoo haqaati – humni kamuu kana hin daangessu!
Dhaamsa kana isiniifan mirkaneessa!
~FM! Arfaasaa 2020
Via: Fiixaa Mootii
የህገ መንግስት አተረጔጎምና ፖለቲካዊ ተፅእኖ – ቆይታ ከዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር
Oromia:The Janjaweed militia (special police) and the much ”reformed” army are burning down houses of farmers.